Warshada Taxanaha 10G | Shiinaha Soosaarayaasha Taxanaha 10G, Alaab-qeybiyeyaal
10G XFP Duplex / CWDM / DWDM / BIDI Transceivers indhaha
Taxanaha 10G XFP ee qaybta muraayadaha indhaha waxaa ka mid ah Duplex / CWDM / DWDM / BIDI, kaas oo taageera noocyo kala duwan oo masaafada gudbinta ah oo u dhexeeya 300M ilaa 80KM Waxay u hoggaansamaan 10-Gigabit Ethernet, SONET OC-192 / SDH STM-64 iyo 10G Fiber Channel 1200-SM-LL-L. Qeybta ugu weyn ee dalabku waa shabakadda CWDM / shabakadda DWDM / gudbinta SDH / SONET / FC iyo deegaanno kale.
10Gb / s SFP + 1270nm / 1330nm 10km DDM DFB LC qalabka wax lagu wareejiyo
10Gb / s SFP + BIDI waxaa loogu talagalay in lagu isticmaalo 10GBASE-BX Ethernet links. Waxay u hoggaansamaan SFF-8431, SFF-8432, IEEE 802.3ae 10GBASE-LR / LW, SFF-8472 iyo SFP + MSA, FCC 47 CFR Qaybta 15, Class B, iyo Telcordia GR-468-CORE. Qalabka wax lagu wareejiyo wuxuu ku habboon yahay shuruudaha RoHS.
10Gb / s SFP + 1270nm / 1330nm 20km DDM DFB LC qalabka wax lagu wareejiyo
TM-4DDDG / GD-243E laba-jiheeye 10Gb / s (SFP +) wareejiyayaashu waxay waafaqsan yihiin qeexida SFP + Heshiiska Meelaha badan (MSA) ee hadda jira. Waxay u hoggaansamaan 10GBASE-LR / LW Ethernet, SONET OC-192 / SDH iyo 10G Fiber Channel 1200-SM-LL-L.
Qalabka wax lagu wareejiyo wuxuu ku habboon yahay shuruudaha RoHS.
10Gb / s SFP + 1270nm / 1330nm 40km DDM DFB LC qalabka wax lagu wareejiyo
10Gb / s SFP + BIDI waxaa loogu talagalay in lagu isticmaalo 10GBASE-BX Ethernet links. Waxay u hoggaansamaan SFF-8431, SFF-8432, IEEE 802.3ae 10GBASE-ER / EW, SFF-8472 iyo SFP + MSA, FCC 47 CFR Qaybta 15, Class B, iyo Telcordia GR-468-CORE. Qalabka wax lagu wareejiyo wuxuu ku habboon yahay shuruudaha RoHS.
10Gb / s SFP + 1490nm / 1550nm 80kmm DDM EML LC qalabka wax lagu wareejiyo
10Gb / s SFP + BIDI waxaa loogu talagalay in lagu isticmaalo 10GBASE Ethernet links ， fiber channel iyo codsiga WDM. Waxay u hoggaansamaan SFF-8431, SFF-8432, IEEE 802.3ae 10GBASE-ER / EW, SFF-8472 iyo SFP + MSA, FCC 47 CFR Qaybta 15, Class B, iyo Telcordia GR-468-CORE. Qalabka wax lagu wareejiyo wuxuu ku habboon yahay shuruudaha RoHS.
10Gb / s SFP + CWDM 1270nm ~ 1450nm 20km DDM DFB LC qalabka wax lagu wareejiyo
10Gb / s SFP + CWDM taxanaha wareejinta muraayadaha waxaa loogu talagalay arjiga xiriirka isgaarsiinta sida 10G Ethernet, kaasoo si buuxda ugu hogaansamaya qeexitaanka SFP + MSA SFF-8431.
Qaybtani waxaa loogu talagalay halbeegga halbeegga ah wuxuuna ku shaqeeyaa dherer dherer dherer ah oo dhererkiisu yahay CWDM.
10Gb / s SFP + CWDM 1270nm ~ 1610nm 10km DDM DFB LC qalabka wax lagu wareejiyo
Wareejiyayaasha muraayadaha indhaha waxay u hoggaansamaan shuruudaha RoHS.
10Gb / s SFP + CWDM 1470nm ~ 1610nm 40km DDM DFB LC qalabka wax lagu wareejiyo
10Gb / s SFP + CWDM 1470nm ~ 1610nm 80km DDM DFB LC qalabka wax lagu wareejiyo
10Gb / s SFP + SR 850nm 300m DDM VCSEL LC qalabka wax lagu beddelo
10Gb / s SFP + SR waxaa loogu talagalay in lagu isticmaalo 10-Gigabit Ethernet xiriiriyeyaasha ka badan fiber multimode. Waxay u hogaansamaan SFF-8431, SFF-8432, IEEE 802.3ae 10GBASE-SR / SW iyo 10G Fiber Channel 1200-Mx-SN-I. Hawlaha baaritaanka dhijitaalka ah waxaa lagu heli karaa iyada oo loo marayo 2-silig isdabajoog ah, sida ku cad SFF-8472.
10Gb / s SFP + LR 1310nm 10km DDM DFB LC Wareejinta qalabka indhaha
10Gb / s Feejignaanta Foomka Yar ee Fudud ee SFP + wareejiyeyaasha waxaa loogu talagalay in loogu isticmaalo iskuxirayaasha 10-Gigabit Ethernet illaa 10km oo ka sarreeya halka loo yaqaan 'Single Mode fiber'. Waxay u hoggaansamaan SFF-8431, SFF-8432 iyo IEEE 802.3ae 10GBASE-LR / LW, iyo 10G Fiber Channel 1200-SM-LL-L Dijital ogaanshaha shaqooyinka waxaa laga heli karaa iyada oo loo marayo 2-silsilad taxane ah. Wareejiyayaasha muraayadaha indhaha waxay u hoggaansamaan shuruudaha RoHS.
10Gb / s SFP + LR 1310nm 20km DDM DFB LC Wareejinta qalabka indhaha
10Gb / s Waxyeelaha Foomka Yar ee Fudud ee SFP + wareejiyeyaasha waxaa loogu talagalay in loogu isticmaalo 10-Gigabit Ethernet xiriiriyeyaasha ah illaa 20km dusha Fibilka Kaliya. Waxay u hoggaansamaan SFF-8431, SFF-8432 iyo IEEE 802.3ae 10GBASE-LR / LW, iyo 10G Fiber Channel 1200-SM-LL-L Dijital ogaanshaha shaqooyinka waxaa laga heli karaa iyada oo loo marayo 2-silsilad taxane ah. Wareejiyayaasha muraayadaha indhaha waxay u hoggaansamaan shuruudaha RoHS.